Ku rakib oo ku rakib Plank Imtixaanka Debian + [My desktop toddobaadkan] | Laga soo bilaabo Linux
Soo Gal / Diiwaangeli
Ku rakib oo ku rakib Plank Imtixaanka Debian + [My desktop toddobaadkan]
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Shalay waxaan ku aragnay desktop-kayga PC-ga aan haysto KDE, maantana waanu arki doonaa miiska aan ku haysto netbook, taas oo sidaad ogtahayba tahay Xfce (desktop-ka aan ugu jeclahay, in kastoo qaar moodeyn) taas oo aan ugu daray dock markasta oo aan jeclaa fudaydkeeda: Qorshe.
Kuwa aan aqoon, Qorshe waa dekedda loo isticmaalo mashruuca Dugsiga Hoose, kaas oo ku qoran Vala sidaa darteedna, waa wax iska fudud oo cunaaya ilo aad u yar (kiiskeyga qiyaastii 15MB).
In kasta oo si fudud, Qorshe leeyahay wax walba oo aan uga baahanahay a Dock, taasi waa, si fudud ayaan ku dari karaa ugana soo saari karaa walxaha wuuna dhuumanayaa marka daaqad ay saaran tahay, anigoo mar dambe awood u yeelan kara helitaanka arjiga anigoo kaliya ku dhajinaya tilmaamaha cirifka hoose ee shaashadda.
Nasiib darrose, Qorshe lama heli karo gudaha Debian, laakiin waan rakibi karnaa iyadoo la isticmaalayo xirmooyinka laga heli karo PPA de Launchpad. Sikastaba, wixii aan sameeyay waxay ahaayeen kuwa soo socda:
1.- Abuur feyl qoraal ah oo la yiraahdo Down Miiska dushiisa oo ku dheji tan gudaha:
2. - Waxaan furay terminal ka desktop-ka oo waxaan dhigay:
$ wget -c -i Down
3. - Kadib markaan soo dejiyo dhammaan xirmooyinka waxaan ku qoray boosteejada:
4.- Waa macquul inay na siiso khaladaad ku tiirsanaan, marka waa inaan fulinnaa:
5.- Waxaan rakibnaa / cusbooneysiinnaa xirmooyinka lagama maarmaanka ah iyo haddii uusan weli rakibnayn Qorshe Waxaan mar labaad ku soconaa tallaabada 3.
Hadda, sida caadiga ah astaamaha Qorshe Waxay cabiraan 48px marka loo eego shaashadda netbook way xad-dhaaf yihiin. Maaddaama aysan haysan qalab qaabeynta, waa inaan ku taabannaa feyl gacanta:
$ nano ~/.config/plank/dock1/settings
Laga soo bilaabo faylkaas cabbirka na daneynaya waa:
Halka aan ku badali karno qiimaha 48 ee 32, 24 ... iwm Gudaha galka ~/.config/plank/ Waxaan ka heli karnaa feylasha qaabeynta kale, halka aan ka beddeli karno, iyo waxyaabo kale, qaabka mawduuca dekedda.
In lagu daro walxaha waa inaan u jiidi karnaa qoraallada ku jira liiska Qorshe iyo hadhow, abaabul si aan u dhigno meesha aan dooneyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ku rakib oo ku rakib Plank Imtixaanka Debian + [My desktop toddobaadkan]
17 faallooyin, ka tag taada
samee 10 sano
Waxaan u jiray labo daqiiqo inaan tan ku waydiiyo madasha. Tan iyo markii aan isku dayay inaan ku rakibo adeskbar Crunchbang oo aniga ima aysan shaqeynin. Thanks, sida had iyo jeer maqaallo aad u fiican.
Ku jawaab Pavloco
Waxaan ku tijaabinayay Xubuntu, waana run in isticmaalkeedu hooseeyo, sidoo kale xusuusnow inay jiraan mawduucyo loo yaqaan 'Plank' oo ay u baahan yihiin oo keliya in faylasha dock.theme iyo hover.theme lagu beddelo .config / plank / theme, hase yeeshee Ugu dambeyntiina, kuma qanci karo inaan isticmaalo dock-ka sidii hawl-wadeenno waxaanan joojiyay isticmaalkiisii, waxaan dib ugu laabtay Qaahira, oo aan weli u adeegsado laakiin kaliya billaw ahaan, oo in yar iga yar.
Halkee ayaan ka helayaa mawduucyada loogu talagalay Loox?
Jawaab si aad uhesho elav <° Linux
Baltazar Mayo Calderon dijo
In kasta oo in yar ay runti qurux badan yihiin, shaqsiyan waan u isticmaalaa tan: http://fav.me/d3js68j
Jawaab Baltazar Mayo Calderón
u muuqataa weyn. XFCE hubaal waa mid aad u wanaagsan deegaan ahaan.
Ku jawaab Marco
Sida muuqata horumariyeyaashu waxay beddelayaan naqshadda otomaatiga si aysan u faragelin barnaamijyada qaarkood (sida markaad ku sheekaysato facebook) iwm
Warku waa kan: http://shnatsel.blogspot.com.ar/2012/07/application-dock-for-2010s.html
Ku jawaab vickypipy
Mudane Linux dijo
Fursad noqo, si aad ugu mahadnaqdo Elav, buuga rakibaadda ee aad ka sameysay Debian, oo qaab pdf ah oo leh ku dhowaad 40 bog, aad u wanaagsan, Ku rakib tijaabada Debian si deg deg ah.
Waxaan ku rakibey xfce4, laakiin kuma xirneyn KDE maxaa yeelay ma awoodo inaan rakibo.
Jawaab Mr. Linux
samee 9 sano
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaan. Fikradaha noocan oo kale ah ayaa kugu dhiirrigeliya inaad wax u qabato Bulshada de GNU / Linux.
Waad ku mahadsantahay wadaagida, waa sida inaad haysato qayb yar oo Dugsiga Hoose ah: P!
Ku jawaab brutosaurus
Sax, sidoo kale looxku waa wax aad u fiican sidaa darteed ku heynta XFCE waa hadiyad kaliya tafaasiil iyo aasaasi ay na siin karto 🙂
Ku jawaab seadx6
Mawduuca ka baxsan. Su'aal baan qabaa. Qofkasta ma garanayaa inuu cusbooneysiiyo glibc Debian?
Waa doqonimo, laakiin anigu ma isticmaalo looxa maxaa yeelay ma laha dhawaansho
Ku jawaab cafis
Pearl Eyebrow dijo
Laakiin CrunchBang 11 waa inaan kala soo baxaa .deb-ka https://launchpad.net/~ricotz/+archive/docky/+build/3714657 si loogu rakibo.
Jawaab Perla Ceja
Haye, ma cusbooneysiin kartaa boostada?
Ku jawaab xxmlud
Alberto Aru dijo
Adiguna kama gudbi kartid qaabeynta laga soo bilaabo loox ilaa docky? Ma awoodin inaan ku rakibo sabuurad debian jessie, dhibaatooyin ayaa i soo maray waxaanan u maleynayaa inay taasi fududahay
Hadaad awoodo, qof ma isiin karaa qaabeynta iyo meesha aan uga tagayo? Waxaan leeyahay docky rakibay
Ku jawaab Alberto Aru
Eder bohorquez dijo
samee 8 sano
Casharradan waxbaba iima tarin, waxaan hayaa tijaabinta debian-ka waana inaan beddelaa nooca xirmooyinka maxaa yeelay lama heli karo, anigu kama arko wax ku jira galka faylasha ee loo baahan yahay in la qabto oo aanan weli bilaabin dekedda ka hor mahadsanid
Ku jawaab eder bohorquez
Anigu kuma habeyn karo crunchbang, waxay ku rakibtaa dhibaato la'aan laakiin feylka qaabeynta ma jiro.
goobtan qaabeynta wax fudud ma jiraan ... taasi waa, galka Plank ayaa la la'yahay.
Ku jawaab guman
Tifaftirayaasha qaabeynta (* Tifaftirayaasha tifaftirka)
MenuLibre: Sida Alacarte laakiin iftiin.
Ka hel wararkii ugu dambeeyay ee Linux emailkaaga